Kubatanidza Kushambadzira kwepasi rose kweIye Brand mu 23 Nyika | Martech Zone
Sechiratidzo chepasirese, hauna imwe zvepasi rose vateereri. Vateereri vako vanosanganisira vakawanda vematunhu uye vemunharaunda vateereri. Uye mukati meumwe neumwe wevateereri pane nyaya chaidzo dzekubata nekutaura. Idzo nyaya hadzingoite semashiripiti. Panofanirwa kuve nechinangwa chekutsvaga, kutora, wozovagovana. Zvinotora kutaurirana nekubatana. Kana zvikaitika, chishandiso chine simba chekubatanidza brand yako kune vateereri vako chaivo. Saka unobatsirana sei nezvikwata zvakatenderedza nyika makumi maviri nematatu, mitauro mishanu yepakati, nenzvimbo dzinosvika gumi neshanu?
Kuvaka yakabatana yepasi rose mhando: iyo chaiyo ine 50-peji peji chiratidzo gwaro
Nhungamiro dzeBrand dzakakosha pakuchengetedza mhando inoenderana. Ivo vanopa zvikwata zvako nzwisiso mune ndiani, chii, nei, uye sei kwechiratidzo. Asi gwaro remapeji makumi mashanu emhando yemhando yega haringakure mhando yepasi rose. Chinongova chidimbu chimwe chete chinoda kubatanidzwa nenhau dzevatengi nezviri mukati kuti vataurirane nazvo.
Wakaisa mari yakakosha nguva nemari muchirongwa chepasi rose chekutsvaga chete kuti uwane zvikwata zvako kutenderera pasirese zvisingateereri? Makuru echiratidzo mabhii ega haabatanidze zvikwata kutenderera pasirese mushure mekuburitsa imwe. Kunyangwe iine iyo yese mitemo uye ichitaridzika zvakanaka, zvakadaro haisi kuuya kuhupenyu. Uye kunyangwe nebasa rakanaka riri kuitika, hapana chaiko kuyedza kugovera kune dzimwe nyika.
Mucherechedzo wepasirese unofanirwa kushambadza kune vateereri vemuno nevematunhu uye vimbai zvikwata zvako zvekushambadzira kuendesa mishandirapamwe yemunharaunda
Vateereri vako havasi vese. Iko hakuna imwechete yakasangana "yepasirese" vateereri iyo timu yako inogona kutarisisa. Vateereri vako vane vateereri vazhinji vemuno. Paunenge uchiedza kushambadzira kune wese munhu uchishandisa iwo chaiwo mutauro uye mafoto, iwe unopedzisira uine cliché stock kutora mifananidzo isina munhu ane hukama nayo. Kugadzirira kupa simba timu yega yega yekutengesa kuyambuka nyika makumi maviri nematatu kuti vatore nekugovana idzodzo nyaya, idzi nyaya dzinobva dzave musimboti wechiratidzo chitsva uye chakagadziridzwa.
Nyaya yako yepasirese inoumbwa nenyaya dzemuno
Mucherechedzo wepasi rose haugone kuve nzira-nzira yemugwagwa kunze kwemuzinda. Nongedzo uye nhungamiro kubva kudzimbahwe zvakakosha, asi zano rako repasirese harifanirwe kufuratira kukosha kweavo vepedyo nevateereri iro mucherechedzo urikutaura. Panofanirwa kuve nekuchinjana kwemazano uye zvemukati pakati pedzimbahwe uye zvikwata kutenderera pasirese. Izvi zvinowedzera kusvika kwechiratidzo chako uye zvinopa zvikwata zvako zvepasirese muridzi wechiratidzo.
Rudzi urwu rwe "kubvumidza hunyanzvi" huzivi kwete chete rinopa simba zvikwata zvemuno asi rinopa nyaya dzemhando yepamusoro uye zvemukati zvemamwe matimu ematunhu pamwe nedzimbahwe ravo. Uine mamwe mazano uye kugovana zvemukati, iyo inowirirana uye inorarama iyo mhando inova.
Kubatanidza zvikwata zvekushambadzira munyika dzese makumi maviri nematatu
Paunenge uchishanda munzvimbo dzinosvika gumi neshanu dzakasiyana dzenguva, haugone kuvimba nenhare kuti dzive nzira yavo chete yekutaurirana, kunyanya kana uchibata nenisimba yenyika dzichiri kusimukira dzinogona kutungamira mukufona kazhinji. Kuendesa yega-yekuzvishandira modhi inogonesa zvikwata kuwana izvo zvavanoda, kana vachizvida.
Matimu anofanirwa kumisikidza a digital asset management (DAM) system. Iyo DAM system inzvimbo inonzwisisika, inokwanisika apo chero munhu anogona kuwana kana kupa zvemukati. Inobatsira kugovana nyaya uye zvemukati. Kugadzira kukosha kweava vanoshanda nesimba vashambadzi kwakabatsira kusimudzira system yacho, uko iyo yakamira yega brand doc yakawira pasi.
Iyo DAM system inoshanda senge yepakati yezvigaro hub kune ese ma timu. Inovapa simba rekubatanidza uye kuongorora zvirimo zvine nyaya dzavanogashira, uye zvinopa nyore kujekesa kune izvo zvimwe zvikwata zviri kugadzira. Kushandisa DAM system kunopa masimba kumahofisi makuru, zvikwata zvemuno, nevamwe kuti vashande pamwe - kwete kungoshanda vega.
Maitiro edhijitari easset manejimendi anobatana sei 23 nyika
Kuhaya mutsigiri wemunharaunda kuti atore nyaya dzevatengi, uye kushandisa iwo mapikicha mumakambani ekushambadzira emuno. Asi hazvigumiri ipapo. Mifananidzo inogona kuiswa kune iyo DAM system uye kuongororwa nehunhu uye kupihwa metadata. Izvo zvinobva zvawanikwa kuti zvishandiswe kune mamwe mafizikisi, yechitatu-bato yakananga tsamba, uye nedzimbahwe kumishumo yegore. Kuchinja tarisiro yekupa simba kumakambani avo emunharaunda ekushambadzira zvakabatsira kupararira kwemazano, kuendesa mushandirapamwe wekushambadzira, uye kugovana nyaya dzekubudirira.
Tags: assetsset managementbrandingdhamudigitaalinen aseti manejimendizvepasi rosebrand yepasi rosewedzera